Kooxda Dekedda oo kal ciyaareedkan ku guuldarreysatay inay horyaalka Somali Premier League ku garaacdo Naadiga Midnimo – Gool FM
Kooxda Dekedda oo kal ciyaareedkan ku guuldarreysatay inay horyaalka Somali Premier League ku garaacdo Naadiga Midnimo
(Muqdisho) 03 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Dekedda ayaa kulankii shalay ay la dheeshay naadiga Midnimo waxay ku kala baxeyn barbaro goolal la’aan ah, ciyaar ka tirsanayd horyaalka Somali Premier League fasal ciyaareedkan 2019-20.
Difaacdayasha horyaalka Somali Premier League ee Dekedda FC ayaa ku dhiban inay sanadkan ka adkaato wiilasha Midnimo, iyadoo kulankii hore horyaalka ay ku kala baxeen barbaro 1-1, halka kulankii shalay ay goolal la’aan ku kala tageen.
Naadiga Dekedda ayaa lumisay dhibco muhiim u ahaa, maadama ay iminka leedahay 21-dhibcood, halka kooxaha ku soo xiga ay isbuucan dheelayaan waxaana ka mid ah Elman oo 18-dhibcood leh iyo Horseed oo leh 18-dhibcood, haddii ay Elman soo adkaato kulanka ay berri la dheeleyso kooxda Heegan hoggaanka ayey qaab fariqa goolasha ah ku qaban doontaa, taasna waa mid dhib ku ah Dekedda FC.
Wiilasha Dekedda ayaa sanadkan raba inay markii afaraad oo xiriir ah ay ku guuleystaan horyaalka Somali Premier League, balse waxay cadaadis wayn kala kulmaysaa kooxaha ugu tunka weyn horyaalka, kuwaas oo raba dhankooda inay gacanta ku dhigan horyaalka.
Dekedda horyaalka sanadkan waxay ka dheeshay 10-kulan, iyadoo hal kulan oo qura guuldarro la kulantay waxayna guuldarradaas ka qaabishay kooxda Mogadishu City Club kaddib markii loogu adkaaday 5-0, waxayna iminka leedahay 21-dhibcood.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Dekedda kulanka soo aaddan waxay la dheeli doonta kooxda kubadda cagta Gaadiidka ciyaartasoo dhici doonta 09-03-2020.
Kooxaha Chelsea vs Liverpool & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaarayo tartanka FA Cup-ka